Villa Soomaaliya ma awoodii Ra'iisul Wasaaraha Magacaaban ayay la wareegtay? - Awdinle Online
Maxay ka dhigan tahay Muuqaalka laga soo duubay Ra’iisul Wasaaraha magacaaban in lagu faafiyo Page-ka Villa Somalia u gaarka ah ?. waxaa caado ahaan jirtay in Madaxweynuhu isaga hor-geeyo Golaha Shacabka una weydiiyo codka Kalsoonida in la siiyo Ra’iisul Wasaaraha magacaaban.
Haddaba Ra’iisul Wasaaraha magacaaban codsiga uu afkiisa ku weydiistay kalsoonida Baarlamaanka ma waxay calaamad u tahay in aanu Madaxweynuhu hor-geyn doonin ama la tagi doonin Baarlamaanka Ra’iisul Wasaaraha, si uu ugu weydiiyo codka kalsoonida.
Qoraa Cabdi Casiis Glof Yare
Previous articleDilal kusoo batay Magaalada Jowhar & Maamulka oo Amaro soo saaray
Next articleDowladda oo War kasoo saartay kufsiga kusoo batay dalka